အဲဗာတန်အသင်းရဲ့နည်းပြဖြစ်လာခဲ့တဲ့ ဆမ်အလာဒိုက်စ် - Fox Sports Myanmar
အင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ် ကလပ်အသင်းများစွာရဲ့ နည်းပြဟောင်းဖြစ်တဲ့ ဆမ်အလာဒိုက်စ်ကို အဲဗာတန်အသင်းရဲ့နည်းပြအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပြီး (၁၈)လသက်တမ်းရှိတဲ့ စာချုပ်တစ်ရပ်ကို ချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်အရ ဆမ်အလာဒိုက်စ်ဟာ အဲဗာတန်အသင်းမှာ နောက်တစ်နှစ် ရာသီကုန်ဆုံးချိန်အထိ အသင်းမှာရှိနေမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဆမ်အလာဒိုက်စ်ကပြောကြားရာမှာ – “ အသင်းရဲ့ သမိုင်းမှာ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့မှု တွေက ကျွန်တော့အတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ အသင်းရဲ့ အခြေအနေက လက်ရှိချိန်မှာ ခက်ခဲမှုတွေရှိနေပြီး ကျွန်တော့်အနေနဲ့ တတ်နိုင်သမျှ ရုန်းထွက်ပြီး ပြန်လည်နိုးထလာအောင် လုပ်ရပါမယ်။ အရင်ကဘာတွေပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ လက်ရှိချိန်မှာ အားလုံးလက်တွဲပြီး လုပ်ဆောင်ရ ပါမယ်။ ဒီနည်းပြရာထူးအတွက် အရင်တည်းက စိတ်ဝင်စားခဲ့တာပါ။ ” လို့ဆိုပါတယ်။
လက်ရှိ အဲဗာတန်အသင်းရဲ့နည်းပြအဖွဲ့မှာ ဂိုးနည်းပြ မာတင်မာဂတ်ဆင် ၊ ကြံ့ခိုင်ရေးနည်းပြ ရိုင်လန်မော်ဂန်တို့အပြင် အသင်းနဲ့ကာလကြာလက်တွဲခဲ့တဲ့ လက်ထောက်နည်းပြ ဆမ်မီလီ ၊ မကြာသေးခင်ကမှ လက်စတာစီးတီးအသင်းမှ ထုတ်ပယ်ခဲ့တဲ့ ခရိတ် ရှိတ်စပီးယား တို့လည်း ပါဝင်နေပါတယ်။
အဲဗာတန်အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှူးဟောင်း ဒူကန်ဖာဂူဆန်ကလည်း အသင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာ နေရာ တစ်နေရာရဖို့ မျှော်မှန်းထားပါတယ်။
ဆမ်အလာဒိုက်စ်မတိုင်ခင် ယာယီနည်းပြအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ အန်စ်ဝေါ့သ် ကတော့ပွဲစဉ် (၁၃) မှာ ဆောက်သင်တန်အသင်းကို (၄)ဂိုး (၁)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မှာ အမြဲတမ်း နည်းပြ အဖြစ် တာဝန်ယူဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိချိန်မှာတော့ အဲဗာတန်အသင်းဟာ ရမှတ်(၁၅)မှတ်နဲ့ အမှတ်ပေးဇယားရဲ့ အဆင့်(၁၃)နေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်။
ဆမ်အလာဒုိုက်စ်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့(၂)ရက်ကပဲ အဲဗာတန်အသင်းဆီကို ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး အပြီး သတ်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ကာ အသင်းရဲ့ အဓိက ရှယ်ယာရှင် ဖာဟက်မိုရှီရီနဲ့ တွေ့ဆုံ ပြီး ညနေခင်းမှာပဲ အန်စဝေါ့သ်နောက်ဆုံးကိုင်တွယ်တဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ ၀က်စ်ဟမ်းအသင်းနဲ့ပွဲစဉ်ကို ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါပွဲစဉ်မှာတော့ အဲဗာတန်အသင်းက ရွန်းနီရဲ့ ဟက်ထရစ်ဂိုး နဲ့အတူ (၄)ဂိုး ဂိုးမရှိနဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဆမ်အလာဒိုက်စ်ဟာ လာမယ့် ပွဲစဉ်(၁၅)အဖြစ် ဟက်ဒါစ်ဖီးအသင်းနဲ့ အိမ်ကွင်းပွဲစဉ်ကို အဲဗာတန်နည်းပြအဖြစ် ပထမဆုံး ကိုင်တွယ်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
? | A familiar name in the football world… here’s Sam Allardyce’s managerial story so far.
Home Football အဲဗာတန်အသင်းရဲ့နည်းပြဖြစ်လာခဲ့တဲ့ ဆမ်အလာဒိုက်စ်